Paxful Kiishada Bitcoin
Hel kaydkaaga bilaashka ah, ee amaanka ah ee Bitcoin
Qaab fudud oo amaan ah oo loo iibsho, loo gado, loo diro, loona kaydiyo Bitcoin kaaga.
waa qaab amaan iyo qanaaco leh oo aad ku maarayso lacagtaada. Maanta isqor oo ogoow sababta malaayiin dad ah ay noogu kalsoon yihiin.
Hel kaydkaaga bilaashka ah ee Bitcoin
Kayd Bitcoin oo aad isku halayn karto
In ka badan 3 milyan oo dad ah ayaa isticmaalay kaydka Paxful si ay u diraan una helaan lacag ka badan 40,000 oo BTC ha. Nidaamyadeeda amaanka ee ugu wanaagsan ayaa ka dhigta kaydka loogu kalsoonida badan yaay caalamka — marka uma baahan doontid marna inaad kala dooratid amaanka iyo qanaacada.
Kaydka Paxful waa mid shaqaynaaya, badqab leh, ayna fududahay inaad ku adeegsato dhammaan aaladahaaga. Waxaad si fudud u maarayn kartaa lacagahaaga waxaadna si toos ah ugu isticmaali kartaa suuqyadeena dadku toos iskula macaamilaan, waxaadna diri karta aaadna heli kartaa Bitcoin, kadib markaad dhawr meelood gujiso.
0% Ma jirto lacag dulsaar ah
6,000,000 Macmiilayaal faraxsan
+2,000,000 Kaydadka lacagta ee Paxful
Wali ma hubtid miyaa? Waan fahmaynaa. Halkaan waxaad ka helaysaa qaar kamid ah sababaha ay tahay inaad samaysato Kaydka Paxful.
Haddii aan nahay Paxful, Waxaan muhiimada siinaa badqabka lacagtaada. Xaqiijinteena adag iyo shuruudaha baasweerka ayaa xaqiijinaaya inaad tahay qofka keliya ee arki kara lacagtaada.
Ku raaxayso xroyada in ka badan 300 qaab oo aad ku iibsan karto kuna iibin karto Bitcoin kaaga. Suuqeena dadku toos wax iskaga iibsadaan aaya kugu xiraaya si badqab leh oo qarsoodi kuu ah dadka runta ah ee adigga kula midka ah.
Lacagtaada ku gal si amaan ah meel kasta, iyo markasta. Waxaa ku mahadsan awooda cloud ka, ma lumin doontid lacagtaada xataa haddii aad lumiso aaladaada.
Isticmaalayaasheenu waa na jecel yihiin!
Arag fikirka dadku naga dhiibteen.
Sida lagu arko...
Furo kaydkaaga Paxful ee Bitcoin hadda!
Degdeg lacag u dir/u qaado, oo si dhib la'aan ah ku iibso Bitcoin maanta!
Iska diiwaan geli kaydkaaga bilaashka ah